सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण रोक्न तमलोपाको बैठक | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण रोक्न तमलोपाको बैठक
सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण रोक्न तमलोपाको बैठक
saharatimes Saturday, October 22, 20160No comments
नेता, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सिताराम अग्रवाल मधेशवादी दलका चल्ताफिर्ता नेता हुनुहुन्थ्यो । फोरम नेपाल हुँदै फोरम गणतान्त्रिक र फोरम गणतान्त्रिक हुँदै तमलोपामा छिरेपछि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो तर पार्टीको महाधिवेशन भएपछि उनलाई कुनै पद दिएन । महाधिवेशनमा हिन्दु राज्यको कुरा उठाएपछि पार्टीमा कुनै पद नदिएको सिताराम आग्रवालको दावी छ । उहाँले पार्टीलाई हिन्दु धर्मको पक्षमा काम गर्र्नुपर्ने दवाव दिइरहेका हुन्थे तर उहाँको कुरा कसैले सुनेन । प्रस्तुत छ उहाँसँग सहारा टाइम्सले गरको कुराकानीको मुख्य अंशः
तपाईको पार्टीको बैठक थियो के के भयो बैठकमा ?
—तपाईलाई थाह छैन । म पार्टी कार्यालय जान छाडि सकेको छु । अनि कसरी जानु बैठकमा ।
पार्टी कार्यालय किन जानु हुन्न ?
—अब पहिलाको तमलोपा रहेन । जुन उद्देश्य र जोश उमगंका साथ पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । त्यो अब रहेन ।
किन के भयो ?
—पहिलादेखि तमलोपालाई उच्चजातको पार्टी हो । खास गरि बाहुनहरुको पार्टीहरु भन्थे । महाधिवेशनपछि त्यसमा परिवर्तन आउला भनि सोचेका थिए तर केही भएन । पहिला भन्दा हद पार गरिसक्यो । तमलोपाको वर्तमान लिस्ट हेर्नुभयो भने सबै कुरा थाह हुन्छ ।
त्यही कारणले जानु भएन त बैठकमा ?
–के को बैठक थियो, बैठक किन बोलाएको थियो । सबै अन्योलमा छ अहिलेसम्म । तर एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ कि अब पार्टी एकीकरण हुँदैन । सद्भावना पार्टीसँग एकीकरणको कुरा भइरहेको थियो तर अब यो बैठकपछि एकीकरण टाढिएको छ ।
कसरी भन्नुहुन्छ त्यस्तो ?
–पार्टीका उपाध्यक्ष त्रिपाठीजी यो एकीकरण चाहनु भएको छैन । र, उहाँकै डिजाइनमा यो बैठक बसेको थियो । बैठकमा यस्ता व्यक्तिहरुलाई बोलाइएको थियो जुन व्यक्तिहरु सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण चाहेका छैन । खासगरि त्रिपाठीजी सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण नसहोस् नचाहेको कुरा सबैले थाह पाइसकेको छ । बैठकमा एकीकरणको बारेमा चर्चा हुने र त्यसबाट कुनै निर्णय लिने कुरा थियो तर मैले बुझे अनुसार त्यसलाई एजेण्डामा पनि राखेको थिएन । बैठकमा त्यसको खासै चर्चा पनि भएन ।
त्रिपाठीजीले त्यस्तो किन गरेको होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–त्यो त उहाँलाई नै थाह होला, उहाँलाई नै सोध्नुस् ।
बैठकबाट के निष्कर्ष निस्कियो थाह पाउनु भएको होला नि त ?
–मलाई लाग्छ यो बैठक गोप्य रुपमा राखिएको थियो । किनभने यो दशैंको बेला सबैजना घरमा व्यस्त भएको बेलामा जानी जानी यो बैठक राखेको थियो । बैठकमा कसैलाई बोलाएको थियो । कसैलाई बोलाएको थिएन । अर्थात छानीछानी व्यक्तिहरुलाई बोलाएको थियौं । मैले धेरैजनासँग कुरा गरे त्यसमध्ये धेरैलाई बैठकको बारेमा थाह पनि थिएन । पदाधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष र सांसदहरुलाई मात्र बोलाएको थियो । तर त्यो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु, भातृ संगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो । ब्यानरमा पदाधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष, सांसदको बैठक उल्लेख थियो भने विज्ञप्तिमा केन्द्रीय सदस्यसहितको बैठक थियो भनेका छन् । यो कस्तो अन्योल । यस्तो किन ? नेता तथा कार्यकर्तालाई भ्रममा राख्ने गरि किन यस्तो बैठक राख्यो बुझ्न सकिरहेको छैन । अर्को कुरा, यो महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठक थियो । फुल बैठक हुनुपर्ने थियो तर सबैलाई नबोलाईकन समिति व्यक्तिहरुलाई बोलाएर बैठक बस्यो ।
त्यस्तो किन गरेको होला त ?
–महाधिवेशनपछि पार्टीमा निकै विवादहरु पसेका छन् । चाहिने व्यक्तिलाई पार्टीका ल्याएको छैन, नचाहिँने व्यक्तिहरुलाई चयन गरेर पार्टीमा ल्याएको छ । असन्तुष्टिको थुप्रो छन् पार्टीमा । सबैलाई चित बुझाउन गाह्रो छ । जिल्लादेखि केन्द्रसम्म असन्तुष्टको लर्को छ । अध्यक्षज्यूले कतिलाई जवाफ दिनुहुन्थ्यो ? त्यही भएर सिमितिलाई बोलाएर बैठकको औपचारिकता पूरा गरेको हो ।
को को छन् त्यस्ता नचाहिँदा व्यक्तिहरु ?
–म यहाँ कसैको नाम लिन चाहन्न तर जजसले अध्यक्षजीलाई रकम बुझाए ती व्यक्तिहरु पदाधिकारी पद पड्काए । तपाई पार्टी कार्यालय जानु भयो भने यी कुराहरु सुन्न पाउनुहुन्छ ।
तपाईलाई त केन्द्रीय सदस्य पनि दिएन किन ?
–मलाई दिएन, त्यो ठूलो कुरा होइन । तर पार्टी समावेशी भएको छैन यो दुखद कुरा हो । म एउटा कुरा तपाईलाई बताई दिँउ । जब महाधिवेशन गर्ने कुरा भयो अनि सहयोगका लागि सबभन्दा पहिलो लिस्टमा मारवाडीहरुको नाम नै लेखियो । मारवाडीहरुको लामै लिस्ट थियो । यो महाधिवेशनमा ८० प्रतिशत खर्च मारवाडीहरुले दिएका छन् तर पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्ममा एकजना पनि मारवाडी परेको छैन । नवलपरासीमा पनि मारवारीहरुले राम्रै सहयोग गरेका थिए । पानी पार्न थालेपछि एकजना मारवाडीले आफ्नो सिनेमा हल बन्द गरेर पार्टीका कार्यकर्तालाई बस्न दिनुभएको थियो । नेपालमा ५६ सय कायस्थ छन् तर पदाधिकारीमै दुईजना कायस्थ रहेका छन् । अब भन्नुस् यो पार्टी कति समावेश छन् ।